Ukungondleki, impilo kanye nemvelo | Ukuvuselelwa Okuhlaza
Ukungondleki, impilo kanye nemvelo
La Inhlangano Yezizwe Okwezokudla Nezolimo (i-FAO) kanye I-World Health Organization (I-WHO) isimemezele ukwethulwa kwengqungquthela yesibili yamazwe omhlaba yokudla okunomsoco (i-CIN2) ezoba seRome kusuka ngomhlaka 19 kuya ku-21 Novemba, futhi izobhekana nenye yezinkinga ezibaluleke kakhulu esikhathini sethu: indlela yokuhlela kabusha uhulumeni uhlelo okunomsoco umhlaba ukubhekana nezinselelo ezintathu ezinkulu zekhulu lama-XNUMX?
Inselelo yokuqala, ingxenye enkulu ye- inani labantu umhlaba namuhla uhlushwa ukungondleki. Ingxenye eyodwa kwezintathu yezingane emazweni asathuthuka ukuthuthukiswa zikhuluphele kakhulu noma zibambezelekile ukwanda. Abantu abayizigidigidi ezimbili bayathinteka ekushodeni kwe- micronutrients, futhi abangaphezu kwezigidi ezingama-840 bahlushwa indlala engapheli.
Inselelo yesibili, izinkinga ze impilo kuhlobene nokungabikhona kahle noma ukweqisa kokusetshenziswa kwethu, ngamasu we Producción, ukuguqulwa kwezimboni noma ukusatshalaliswa okuyiphutha, okwandayo. Ukukhuluphala futhi ngokweqile zithinta cishe abantu abayi-XNUMX billion.
El ukusetshenziswa ngokweqile amafutha noma ushukela, izinsalela ze-pesticide ekudleni, ukusetshenziswa okwandayo kwezithako zokudla okunempilo kube yizimo ezinkulu ambit kwezenhlalo Ukungabali izinkinga ze ukuphepha inhlanzeko ebulala abantu abacishe babe yizigidi ezintathu unyaka nonyaka emhlabeni.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » I-Ecology » Ezolimo zemvelo » Ukungondleki, impilo kanye nemvelo
Ukuzimela kwamandla, isitoreji samandla ngamanye
Iphrojekthi ye-Ocean Cleanup yokuhlanza izilwandle